Saamaynta Afduubka Maraakibta Ganacsiga
Afduubka doonyo badeecado u waday gudaha dalka ayaa saamaynaysa alaabtii loo rari jiray dekadaha Somalia, taasi oo keenaysa dhibaatooyin badan.
Hakadka ku imanaya socodka maraakiibta iyo doonayaha u soo sida Somalia badeecadaha kala duwan ee ay ugu horeeyaan Raashinka iyo waxyaabaha quutal daruuriga ah ayaa ku soo beegmaya iyada oo uu soo dhawayahay xilligii bad xidhanka .
Arrintan ayaa sida ay ganacsatada soo rara alaabada kala gedisn ay sheegeen in qasab ay ku noqotay kadib markii la afduubay markaaib iyo doonyo badeecada sida, sida uu sheegayo Cabdi Xassan Macalin oo ka tirsan shirkadda Muqdisho Shipping and Cargo oo saldhigeedyo yahay magaalada Dubai.
Afduubka maraakibta ayaan ahayn mid ku cusub xeebaha Somalia laakin waxaa cusub farsamooyinka is bedelaya ee ay ku shaqeeyaan budhcad badeeda oo ay ugu dambaysay in ay la wareegaan maarkiibta ganacasiga ee Somalia u socota.
Wakhtiga ay talaabadan cusub ee afduubka markiibta ganacsigu ay ku soo beegantay ayaa ah mid xasaasi u ah dadka soomaaliyeed, sida uu tilmaamayo ganacsade Cabdi Xassan oo sheegay in la gaadhay xilligii bad-xidhanka isla markaana ay soo dhowdahay bishii barakaysnayd ee Ramadaan
Haddaba marka ay xaaladdu sidaas tahay ee ay joogsadaan maraakiibtii badeecadaha ganacsiga iyo quutaldaruuriga keeni jiray Somalia waa maxay saamaynta ay arrintaasi xaaladda noloeed ee dadka soomaalida ah ku yeelan karto, waxa arrintaasi wax ka iftiiminya Prof Cabdulaahi Sheekh Cali oo ah ah wasiirdawlaha qorshaynta iyo iskaashiga caalmiga ah ee Somalaia isla markaasina aqoon dheerad ah u leh cilmiga dhaqaalah, isaga oo tilmaamay in xaaladda bin’aadminimo oo markii hore liidatay ay ka sii dari doonto.
Ma aha oo kaliya xaaladda bin’aadminimo midd ay dhibta ugu weyni soo gaadhi doonto hase ahaate dhaqaalaha qoysaska soomaaliyeed ayaa iyaguna halis u ah in ay talaabadan wax ka badasho qaab noloeed dhaqaale ee bulshada.
Lama saadaalin karo inta uu soo socon doono hakkadka ku yimid socodka maraakiibta ganacsiga ee somalia u socota laakin waxaaa iyaduna talo u baahan sidii looga soo kaban lahaa hadiiba ay maraakiibtaasi dib u bilaabaan hawlohoogi bad xidhankana laga baxo.
Ganacsatada ayaa iyaguna geestooda fariin u gudbiyay budhcad badeeda iyaga oo ka codsanya in ay jidka u baneeyaan maraakiibta iyo doonyahay u socda Somalia oo sida ay sheegeen iyaga si fudud looga garan karo maraakiibta shisheeye.
Lama sii garan karo sida ay arrintani ku dhamaan doonto laakin waxaayabaha la is weydiin karo ayaa waxaa ka mid ah ma laga yaaba budhcadbadeedu haddii ay sii wadaan in ay beegsadaan maraakiibta ganacsi ee soomaalida in ay soo jitaan colaad cusub oo kaga timaada dhinaca barriga oo ay waayaan meelo ay hore gabaad uga dhigan jireen.
Qeybta hoose ee qoraalkan ka dhagayso warbixinta.